War Deg Deg Ah Col.Barre Hiiraale oo ku dhawaaqay in uu yahay Madaxweynaha Jubaland State	| Salaan Media
Home Wararka War Deg Deg Ah Col.Barre Hiiraale oo ku dhawaaqay in uu yahay...
Barre Aadan Shire Hiiraale oo ah Sargaal katirsan Ciidanka Dowlada Soomaaliya Horeyna uga mid ahaa Hogaamiyaashii Kooxaha ee Dalka ayaa ku dhawaaqay in uu yahay Madaxweynaha Rasmiga ah ee Maamulka Jubaland State kadib markii uu sheegay in maanta Shir Kismaayo ka dhacay lagu doortay.
Markii uu soo baxay War ku aadan in Hogaamiyaha Kooxda Raaskanbooni Sheehh Axmed Madoobe lagu doortay Shir ka dhacay Jaamacda Kismaayo ayaa kulan kaasi kasoo horjeeday waxa uu isna ka dhacay Magaalada Kismaayo waxaana Madaxweynaha Jubaland loogu doortay Barre Hiiraale.
Ergayda dooratay Col. Barre Hiiraale ayaa ahaa kuwa horey uga soo carooday Shirkii mudada dheer kasocday Jaamacada Kismaayo , waxaana Beelaha Madaxweynaha u doortay Col.Barre Hiiraale ugu cad cadaa beesha uu kasoo jeedo iyo beelo kale oo kamid ah Dadka Deegaanka oo kazoo horjeeday Shirka kale ee Kismaayo kasocday.
Doorashada kadib ayaa Barre Aadan Shirre waxa uu sheegay in Madasha lagu doortay ee kusugnaayeen ilaa 600 oo Ergo ah uuna helay in kabadan 500-cod loona doortay Madaxwewynaha Jubaland State 4-ta Sano ee socota.
Col. Hiiraale ayaa xusay in Shirka lagu doortay uu mudo kasocday Magaalada Kismaayo uuna ahaa shir Soomaalida u gaar ah ayna kasoo baxday in isaga la doortay , halka kulalnka kale ee lagu Doortay Axmed Madoobe ku tilmaamay mid ee gadaal ka riixayeen Dowlada Kenya Soomaalina eesan shaqo ku laheyn.
‘’ Waxaan ogolahay in aan la hadalno cid walbo oo wax ka quseeyaan arimaha Maamulka Jubaland State , si nabad galyo ah ayaana kusoo dhaweenaynaa , waxaana diyaar u ahay xitaa in aan Axmed Madoobe la hadalno hadii uu diyaar yahay’’ ayuu yiri Col.Barre Hiiraale.
Wararka aan caawa ka heleyno Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ee jirto wax xoogaa kacsanaan ah oo ka dhalatay doorashada maanta siyaabo kala duwan uga dhacday Kismaayo laguna doortay labo Madaxweyne ee yeeshaan Maamulka Jubaland State.
Maanta ayaa mar qura Rasaas Culus laga maqlay gudaha Magaalada Kismaayo kuwaa oo u muuqday kuwa Dabaal dag ah ee ridayeen Taageerayaasha labada Madaxweyne ee siyaabaha kala duwan maanta loogu doortay Magaalada Kismaayo, inkastoo dadka qaar ee cabsi badan dareemeen markii ee Rasaasta badan maqleen.